Koorsadan oo cinwaankeedu yahay Jarmalka Perfekt cashar, waxaan ku siin doonnaa macluumaad kooban oo ku saabsan waqtiga saxda ah ee Jarmalka.
Hore ayaan u aragnay, Perfekt macnaheedu waa xiisad la soo dhaafay oo leh -di sida Präteritum. Sidaad ogtahay, weedhaha kacsan ee la soo dhaafay waxay qeexayaan ficillo la sameeyey oo la soo dhaafay.
Waxaan ku sameynay cashar aad u faahfaahsan oo sharaxaad leh oo ku saabsan perfekt Jarmal kahor, haddii aad rabto inaad baarto mawduuca, guji halkan: German Perfekt
Sidii hore loo soo sheegay, waxaa jira farqi u dhexeeya Perfekt iyo Präteritum oo Jarmal ah; Präteritum guud ahaan waxaa loo isticmaalaa luqad qoran, waxaa loo adeegsadaa sarbeeb, waxaa si weyn loogu isticmaalaa sheekooyinka sheekooyinka, sheekooyinka ama sheekooyinka, Perfekt waxaa loo isticmaalaa luuqad isku mid ah, looma isticmaalo shaqooyinka sida sheekooyinka iyo sheekooyinka.
Labadan jeer waxay muujin karaan dhammaan muddooyinka muddooyinka ah, marka laga reebo ciilkii hore.
Tusaale ahaan, waxay qaadan karaan waqtiyo sida "shaqo", "shaqo", "shaqo" laakiin aan loo isticmaalin "shaqo" ama "shaqo".
Isku-dhafka falka Jarmalka
Jadwalka kor ku xusan, qaabka falka ee aan dhamaadka lahayn waxaa lagu daray safka koowaad (bidixda bidix), safka labaad falku waa Partizip Perfekt, kani waa qeybta loo adeegsan doono in lagu sameeyo jumlad Perfekt. Partizip Perfekt ee fal kasta waa in la xafidaa. Tiirka seddexaad ee bidix, waxaa lasiiyay turki u dhigma falka, sadarka ugu dambeeya, waxaa lagusameeyaa falka caawiyaha ah ee ficilkan loo adeegsan doono.
Perfekt, inta badan falka kaabayaasha ah "haben" ayaa loo isticmaalay, waxaan isku daynay inaan xusno ku dhowaad dhammaan shaqallada aan caadiga ahayn ee loo adeegsaday "sein" ee kor ku xusan. Sidaa darteed, waxay u badan tahay inay sax tahay in la isticmaalo haben leh ficil aan ku jirin shaxda kore.
Wixii muxaadaro faahfaahsan German Perfekt Fiiri mawduuceena la magacaabay.
Tags: Isku-dhafka falka Jarmalka, german perfekt mawduuca, falalka jarmalka ah